musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Yakawanda uye isingadhuri mari yekuenda kuUS
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nezvirambidzo zvekufamba zvichiri mukuzara kuzere, vazhinji maAmerican kupfuura nakare vari kusarudza kuenda kuzororo padyo nepamba.
Kudzidza kwakatarisa kune makuru maguta eUS kuti awane zvakanyanya uye zvisingadhuri nzvimbo dzekufambisa.
Oklahoma Guta ndiyo inokwenenzverwa kuenda kunzvimbo yekuUS mabhureki.
New York City ndiyo inodhura kwazvo US kuenda kunzvimbo.
Nezvirambidzo zvekufamba zvichireva kuti maAmerican kupfuura nakare kose vari kusarudza kuenda kuzororo padyo nepamba, nyanzvi dzekufambisa dzakaratidza nzvimbo dzinodhura uye dzinodhura kwazvo dzekuUS kufemera rwendo rwako rwunotevera!
Chidzidzo ichi chakatarisa kumaguta makuru munyika kuti vaone kuti ndeapi anodhura, zvichibva pazvinhu zvakaita sekudya nekumwa, mutengo wehotera nekutakura.
Wepamusoro gumi nzvimbo dzinodhura kwazvo muUS
chinzvimbo manzwiro doro waini Chikafu chekudyira Tekisi (1km mutengo) Imwe-nzira yekutakura tikiti Husiku mutengo wehotera (vhiki yevhiki) Zororo rinokwanisika mamaki / 10
Chidzidzo ichi chakawana Oklahoma City kuve inzvimbo inodhura kwazvo US kuputsika kweguta. Guta racho ndiro raive rakachipa pane hafu yezvinhu zvakaongororwa, richingoita madhora matatu chete kudoro, $ 3 pakudya muresitorendi, uye $ 11.50 kwehusiku muhotera! Kana iwe uchifadzwa neOld West, ipapo Oklahoma City inofanirwa-kushanya, kwaunogona kushanyira iyo National Cowboy & Western Heritage Museum, edza ruoko rwako pakubata uye kufudza mombe uye kutasva mabhiza kupurazi, kana kutora mune rodeo!
Indianapolis nderimwe guta rinodhura kwazvo kushanyira, chinzvimbo chechipiri. Zvekufambisa zvakachipa zvakanyanya, iine nzira-imwe chete tikiti yekutakura yemuno inodhura chete $ 1.75, uye tekisi ye1km tekisi inosvika pa $ 1.24. Inoteverwa neTuscon, sarudzo yakakurumbira kune avo vanoda kushanyira Saguaro National Park uye rimwe remaguta anodhura kushanyira!
Wepamusoro 5 nzvimbo dzinodhura kwazvo muUS
1 New York Guta, New York $7.81 $15.00 $20.00 $1.86 $2.75 $309 2.56
Seimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi, kwete muUS chete asi pasirese, hazvishamise kuona izvo New York City iri zvakare nzvimbo inodhura kwazvo yekuAmerica yezororo, nepo yakavakidzana neBrooklyn iri pachinzvimbo chechina. NYC raive guta rinodhura kupfuura mamwe mana ematanhatu metric akatarisa: doro ($ 4), bhodhoro rewaini ($ 7.81), chikafu cheresitorendi ($ 15), uye kugara kwehotera ($ 20 nehusiku).
Rimwe guta rine mukurumbira rinotora nzvimbo yechipiri, neSan Francisco ichifananidza New York kana zvasvika kune mamwe mitengo uye kwete kumashure zvakanyanya kune vamwe vazhinji. Zvakare nekuve nzvimbo inozivikanwa kwazvo nekuda kwenzvimbo dzayo uye dhizaini, iro guta zvakare ndeimwe yepamusoro-soro muUS, iyo zvakare inotyaira mitengo kumusoro kwevashanyi.